Ndị ọzọ Marches - World March
Mbido » Ihe ndị ọzọ
Uwa nke abuo March 2-2018
Site na October 2, 2018 ruo March 8, 2019
Lee ị nwere ike ịzụta akwụkwọ nke 2nd World March
Site na 16 site na September ruo 13 site n'October
La South America March for Peace and Nonviolence (MS) gara karịa 11.500 kilomita na 28 ụbọchị kwa Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Suriname, Brazil, Argentina y Chile
Ndị inyom na-akwado òtù ahụ kwalitere ihe ahụ "Ụwa na-enweghị Agha na Ime Ihe Ike"Ecuador isi bụ ndị sonyere na Central American March nke 2017 dị ka ndị na-ekiri ụwa.
Obere ìgwè ahụ na ndị na-eme njem si na obodo ndị ọzọ Bogotá, Lima, Santiago, sugar, Córdoba, Sao Paulo na nke nta nke nta a kpụrụ netwọk, ọ bụghị na-enweghị nsogbu, yana ụzọ, ihe omume, okwu yana kwa otu ndị sonyere n'ime otu ìgwè ga-eme ka dum njem. Mgbe isonyere ọzọ oru ndị humanists, gburugburu ebe obibi, emegide agha na nonviolent nakwa dị ka òtù, mahadum, kọleji, municipalities na iche iche nke mba dị iche iche, nke ọnụ ka o kwe omume njem.
Onu ogugu isii si Pacific Corridor, n'etiti ndị na-eje ije na ndị Colombia anọ bụ ndị mere njem zuru ezu, gbakọrọ na ndị si na Santiago de Chile Atlantic Corridor kedu ihe bụ njedebe ikpeazụ nke March nke mere njem iri anọ na atọ, n'agbata obodo ukwu na obodo, ebe ọtụtụ ihe mepụtara na-akwalite Udo na Nkwụsịghị.
Enwere ike ịhụ ozi zuru ezu na Webs
Ị nwere ike ịhụ ma ọ bụ budata akwụkwọ South American March maka n'efu.
Site na 10 site na September ruo 16 site na September
Ndị protagonists nke 1__ Central American March maka Udo na Ngalaba na-adịghịHa gbaara 3.400 kilomita na 7 ụbọchị.
A na-eme ọtụtụ njem, ihe omume, okwu, ememe omenala na ememme na obodo 10, n'etiti obodo na obodo ndị dị na Honduras (Peña Blanca, San Pedro Sula na San Lorenzo), Guatemala (City na Mixco), El Salvador (Ụmụaka, San Salvador na San Miguel), Nicaragua (Borders), Panama na Costa Rica (San José na Heredia).
Ndị njem ahụ bụ otu ìgwè nke ndị na-akwado 74, ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na-eto eto, ma ndị agadi, gụnyere ụmụaka ụfọdụ. N'oge njem ahụ, ndị ọrụ Ecuador na-esonyere ha dị ka ndị na-ekiri ụwa.
E nyere ndị nnọchianya nke Costa Ricans n'ókè nke Peñas Blancas ka MC esi na Nicaragua Awa mgbe e mesịrị na 1® MC maka Nonviolence na Udo bịara n'isi obodo, San José na Campus Omar Dengo nke National University of Costa Rica (UNA), nke otu narị otu narị ụmụ akwụkwọ, ndị ọkachamara na ndị ọkachamara nabatara ya Dọkịta Dọkịta Alberto Salom n'isi.
Ọbịbịa ya meghere Foro na Ụbọchị University "Ịtụkwasị Obi na Udo" nke emere na ụbọchị abụọ na-esote, Septemba 2 na 14, 15. Ọ bụ njedebe nke nnukwu mbọ nke otu ahụ rutere nke fọrọ nke nta ka ike gwụ ya, ọkachasị n'ihi ihe isi ike ha zutere na omenala na ịgafe ókèala, yana nyocha na-enweghị njedebe na ogologo oge. na-eche, nke n'ọtụtụ ọnọdụ dugara oge na mmemme ndị emebere. Ekwenyesiri ike na ụfọdụ gọọmentị mpaghara na-eme ka o siere ndị mmadụ ike ịgagharị.
Ihe nzukọ ahụ kwalitere "Ụwa na-enweghị agha na n'enweghị ihe ike" Central America Isi ma gua na mmekota nke otutu mahadum, ulo oru na ndi otu.
Akwụkwọ nke Central American March nwere ike ilele ma ọ bụ ibudata ebe a n'efu.
Site na 2 nke October site na 2009 gaa na 2 nke January nke 2010
Enwere ike ịhụ akwụkwọ nke 1ª World March na ebe a